Shuruucdaas oo diiradda saaraya xogta isticmaalaha ayaa qeexi doona isbeddelada soo socda ee teknolojiyadda teknolojiyadda iyo istiraatiijiyadda xogta. Qaab-dhismeedka nidaamku wuxuu carqaladeeyaa moodooyinka jira ee dabagalka akhlaaqda isticmaalaha laakiin wuxuu u furayaa albaabbada daabacayaasha inay ku soo ururiyaan xogta isticmaaleyaasha ogolaanshahooda.
Miisaanka xogta wuu yaraan karaa, laakiin siyaasaddu waxay kordhin doontaa tayada xogta la heli karo mustaqbalka fog. Daabacayaashu waxay u baahan yihiin inay isticmaalaan waqtiga haray si ay u dhisaan moodello la falgal wax ku ool ah ula leh dhagaystayaasha. Qawaaniinta asturnaanta waa inay la jaanqaaddaa tiknoolajiyada daabacaadda iyo qaababka maaraynta xogta. Ma jiro wax hal-ku-habboon-oo dhan xal maxaa yeelay waxaa jira sharciyo kala duwan oo asturnaanta suuqyada kala duwan.
Warbaahinta ay taageerto xayeysiinta ayaa u baahan inay ku tijaabiso qaabab caan ah oo xayeysiis ah si ay u magdhabaan qasaaraha ka soo gala ololaha xayeysiinta ee hakadka galay.
Sida laga soo xigtay warbixinta IAB, ku dhowaad saddex-meelood laba meel miisaaniyadaha dhijitaalka ah ayaa loo qoondeeyay xayeysiinta fiidiyowga, labadaba mobilada iyo desktop-ka. Fiidiyowyaashu waxay soo saaraan aragti waara oo keenta beddelaad iyo iibin. Si aad uga faa'iideysato ciyaarta barnaamijka, daabacayaashu waxay u baahan yihiin awoodo ay ku soo bandhigaan xayeysiinta fiidiyowga, taas oo la jaan qaadi doonta barnaamijyada waaweyn ee dalabyada.
Ugu horreyntii, kan ugu horreeya, tiknoolajiyada tifaftiraha daabacaadda waxay u baahan tahay inay lahaato server xayeysiis ah. Adeeg xayeysiis sax ah ayaa shuruud u ah lacag-ururinta fikradda wax ku oolka ah. Waxay ubaahantahay inay lahaato shaqeynta maaraynta ololeyaasha xayeysiinta iyo alaabada. Server-ka xayaysiisku wuxuu u oggolaanayaa inuu dejiyo unugyo xayeysiis ah iyo kooxo dib-u-habeyn ku sameeya isla markaana siiya tirakoobka waqtiga-dhabta ah waxqabadka xayeysiiska. Si loo hubiyo in si macquul ah loo buuxiyo, server-yada xayeysiiska ah waxay u baahan yihiin inay taageeraan dhammaan noocyada xayeysiiska ee jira, sida muuqaalka, fiidiyowga, xayeysiisyada moobiilka, iyo warbaahinta hodanka ah.